Imbali yeMagnolia Manor
I-oasis efihliweyo engapheliyo ihlala kwi-5.2 yeehektare. Umnyango wale ndlu inkulu kunye neyakudala yezitena zoo-1840 yindlu yobuKoloniyali ayikholelekiyo; inendlela yokungena ephindwe kabini ekhokelela kwimithi ephakamileyo edlulileyo kunye nokulungiswa komhlaba okucocekileyo ukuya kwindlela yezitena. Lawula indlela yakho kwiindledlana zokuhamba kunye nezihlahlana ezilungiswe kakuhle, sela iti kwiveranda egqunyiweyo, okanye utye isidlo sasemini kwipatio.
Kukho ichibi lokuqubha ukuze iindwendwe zisebenzise ngexesha lasehlotyeni. Kukwakho nendawo yokucima umlilo enazo zonke izinto ozidingayo.
Kuyo yonke ingaphakathi lobu buhle beklasiki, uya kufumana ingqikelelo yomgangatho ovulekileyo, imigangatho yokhuni oluqinileyo, kunye nokugqitywa kwezinto zakudala ezintle ezixutywe nezinto eziluncedo zale mihla. Indlu yeManor inokungena ngaphambili, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, igumbi leTV kunye ne-1/2 yokuhlambela kumgangatho wokuqala; ngelixa umgangatho ophezulu unamagumbi okulala ama-5, ama-3 anamagumbi okuhlambela ancanyathiselwe. Amanye amagumbi ama-2 abelana ngegumbi lokuhlambela elineshawa.
Le propathi ikwindawo entle kakhulu, kufutshane noMlambo iSusquehanna, yenza ukuhamba ngesikhephe, ukuloba kunye ne-kayaking kube lula- ngakumbi ngepavilion, ibala lokudlala kunye nethampu yesikhephe ngaphakathi kwe-1/4 yemayile ukusuka kwipropathi. Kukho kwakhona umkhondo webhayisekile ecaleni komlambo.
Kufuphi neNook Sports, Hersheypark, kunye nazo zonke iindawo ezinomtsalane zaseLancaster
Olunye uluhlu lwethu lu: